Myanmar Entrepreneur Group: Recession လား Depression လား
Recession လား Depression လား
Recession နဲ့ Depression ကို အရင်က ကျွန်မလည်းမကွဲပါ။ ကျွန်မတို့ ဆီမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုသာ ကျွန်မတို့ က ကောက်ချက်ချဆွဲကြည့်မိတာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုဖြစ်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး ပျက်ကပ်မှုဟာ ဘာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုအပေါ် ရူမြင်လိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ရူစေလိုပါတယ်။
ဒီတော့ Recession လား Depression လား ကိုယ်တိုင်ဦးနှောက်ရှင်းဖို့ အတွက် စီးပွားရေး အဘိဓာန်တွေ ယူကြည့်လိုက်ပါတယ်။
(1) ပထမဦးဆုံး မောင်စူးစမ်းရေးတဲ့ စီးပွားရေးအဘိဓာန် ယူကြည့်လိုက်ပါတယ်။ Recession နဲ့ Depression ကို စကားလုံးအစရှာမရပါ။ ရိုက်သည့်ခုနှစ်ကြည့်လိုက်တော့ ဇွန် 2005 ဒါကြောင့်လားမသိ၊ မရှိ။ တခြားဆရာ့စာအုပ်တွေမှာ အသေးစိတ်တော့ ရေးနိုင်မည်။ ဒီထဲမှာတော့ မပါ။ ထားတော့ ။ နောက်တစ်အုပ်-
(2) ဆရာကျော်ဝင်းရဲ့ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေး အဘိဓာန်ထဲမှာ ရှာလိုက်တယ်။ ဟော . အပြည့်အစုံ တွေ့ လိုက်ပါပြီ။ RECESSION က အရင်စရေးပါမည်။ အကြောင်းရှိပါသည်။
RECESSION ( ရီးဆက်ရှင်း = စီးပွားရေး အကျကာလ ) > စီးပွားရေး အတက်အကျသံသရာ၏ အဆင့်တစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သုံးလပတ် နှစ်ခါဆက်တိုက် ဂျီဒီပီ (GDP) ဆက်တိုက်ကျနေလျှင် ၊ ရီဆက်ရှင်း ဟု သတ်မှတ်သည်။ ရီဆက်ရှင်းမှာ ' စီးပွာရေးပျက်ကပ် ' (depression) လောက်တော့ အခြေအနေ မဆိုးပေ။
စီးပွားရေးအကျကာလ (ရီဆက်ရှင်း) တွင် အစစ်အမှန် ဂျီဒီပီ (GDP) 10 % ၀န်းကျင် ကျတက်သည်။ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ 10 % အတွင်းရှိတက်သည်။ ရီဆက်ရှင်းတစ်ခုမှာ အကြမ်းအားဖြင့် ၆ လမှ ၁၈ လ အထိ ကြာတက်သည်။ ယခုနောက်ပိုင်း ရီဆက်ရှင်းအများစုမှာ၊ တစ်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင် ကြာတက်သည်။
DEPRESSION (စီးပွားရေးပျက်ကပ်) > ' သည်းသန်ပြင်းထန်သော စီးပွားရေးကျဆင်းမှု ' (extreme recession ) ကို ၊ ရည်ညွှန်းဖော်ပြသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ သာမန် ရီးဆက်ရှင်း ထက်အချိန်ကာလ ပိုကြာတက်ပြီး ၊စီးပွားရေးကျဆင်းနေတက်သည်။ အနည်းဆုံး စီးပွားရေး တန့် ရပ်နေသည်။ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း မြင့်မားနေတက်ပြီး၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုများ ပုံမှန်အောက်တွင် ရှိနေတက်သည်။ များသောအားဖြင့် စီးပွားပျက်ကပ်တစ်ခုမှာ ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင် ကြာတက်ပြီး၊ စီးပွားရေး အတက်, အကျသံသရာနှစ်ခု ( သို့ မဟုတ်) သုံးခုမျှကို ဖြတ်ကျော်ရလေ့ရှိသည်။ စီးပွားရေးသမိုင်းတွင် ထင်ရှားသော စီးပွားပျက်ကပ်မှာ ၊ 1930 အလွန်နှစ်များက ကြုံခဲ့ ရသော ' မဟာစီးပွားပျက်ကပ် ' (Great depression) ဖြစ်ပါသည်။ 1840 အလွန်နှင့် 1870 အလွန်နှစ်များကလည်း ၊ အတော်အတန်ပြင်းထန်သော စီးပွားပျက်ကပ်များ ပေါ်ထွက်ခဲ့ဖူးသည်။
အကောင်းဘက်မှ ပြောရလျှင် စီးပွားပျက်ကပ်တာရှည်ပြီး၊ ပြန်လည်ဖွဲ့ စည်းမှုကို အမှန်တကယ် လုပ်နိုင်သည်နှင့်အမျှ၊ စီးပွားပျက်ကပ်လွန်မြောက်ခါစများတွင် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာတက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(3) နောက် The Penguin ကထုတ်တဲ့ Dictionary of Economics ကို ကောက်ယူကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လည်း စုံသားပဲ -
RECESSION > An imprecise term given toasharp slow- down in the rate of economic growth oramodest decline in economic activity, as distinct fromaslump or DEPRESSION which isamore severe and prolonged downturn. RECESSION areafeature of the TRADE CYCLE. Two successive declines in seasonally adjusted, quarterly, real GROSS DOMESTIC PRODUCT would constitutearecession.
DEPRESSION> A downturn in the TRADE CYCLE in which there isasustained high level of UNEMPLOYMENT. The three or four years following 1929 experienced the last major depression in the world economy.
(4) နောက် မောင်ဘောဂရေးတဲ့ စီးပွားရေးအဘိဓာန်မှာ ရှာကြည့်လိုက်ပါတယ်- စာအုပ်က ဆရာကျော်ဝင်းအဘိဓာန်ထက်ကြီးပြီး ခမ်းနားပေမယ့် ဝေါဟာရအရ ပဲ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါတယ် ။အဓိပ္ပာယ် မပြည့်စုံလှပါဘူး - မြည်းစမ်းကြည့်ပါ။
Recession (n)aslowing down or fall in business activity. စီးပွာရေး အရောင်းအ၀ယ်- ဆုတ်ဆိုင်းခြင်း။ - ကျဆင်းခြင်း။ ( ယင်းသို့ သော အခါတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အစိုးရသုံးစွဲငွေများ ကျဆင်းခြင်း နှင့် အလုပ်လက်မဲ့ တိုးပွားခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်တက်သည်။
Depression (n)aperiod with very little economic activity, resulting in mass unemployment and the failure of many business. စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ကျဆင်းသည့်ကာလ။ ( ယင်းကာလတွင် လူအမြောက်အမြား အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအများ စီးပွားပျက်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေသည်။) . ဒီလောက်ပဲပါပါသည်။
References ကိုးကားတာတော်လိုက်ပြီထင်လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အရှိန်သတ်လိုက်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ၀န်ခံစရာတစ်ခုရှိပါသည်။ ကျွန်မ Blog ရေးသားသည်ဆိုသည်ထက် Sharing လည်းလုပ်ရင်း ၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဗဟုသုတရှာရင်း စုဆောင်းခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ သူငယ်ချင်းတို့ လည်း ၀ိုင်းဝန်းပြီး ကိုယ်သိသလောက် အမြင်တွေလည်း ပြန်လည် မျှဝေစေလိုပါသည်။
အခု ဖြစ်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး ပျက်ကပ်မှုဟာ Recession လား Depression လား မသေချာမှုတွေများစွာ ဖြစ်တယ်ခံစားမိတဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်အဖြေထုတ်နေမိပါတယ် ။ Recession နဲ့Depression မတူတာကို ဟောပြောပွဲတွေမှာရော ကျွန်မတို့ ဆရာဆရာမတွေကပါ ရှင်းပြပါတယ် ။ ကျွန်မသင်နေတဲ့ Business Management မှာ Eco တစ်ဘာသာကိုပဲ အကျဉ်းချုံးပြီးသင်လိုက်ရတဲ့အတွက် Economic View အရ သိပ်အာဘော် မရလိုက်ဘူး ။ အပြင်မှာ သင်တန်းတွေထပ်တက် ဟောပြောပွဲတွေ သွားနားထောင်တော့မှ တော်တော် ခံတွင်းတွေ့ လာတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ သာယာဝပြော ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ကို Economic View အရ မကြည့်ရင် အမြင်မရှိရင် ဘယ်လိုမှ ကြီးပွားတိုးတက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ ဟိုနေ့ က Myanmar IT development web ကို သွားလည်ကြည့်တော့ IT အကြောင်းတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီးရေးကြတာ တကယ်အပျံစားပဲ ။ စီးပွားရေးအကြောင်းတွေလည်းပါတယ် ။ တကယ်မိုက်တယ်။
အဲ . ကိုယ်သင်နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ Economic, Management ဖိုရမ်တို့Groups တို့ က ကျတော့ မတွေ့ မိဘူး။ ဒါကြောင့် တော်တော်ဝမ်းနည်းမိတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ Groups Discussion အနေနဲ့ ကို ဖက်ချင်တာ ။ ကိုယ့်မြန်မာစကားလုံးတွေနဲ့ မြန်မာလို ဆွေးနွေးချင်တာပါ။ အဆင့်မြင့်ပညာရှင်တွေက သူ့ အခန်းလိုက် ၀င်ဆွေးနွေးပေးစေချင်တာပါ။ အခွင့်အလန်းဂျာနယ်က Web ပေါ်တင်ပေးထားတဲ့စာတွေ ကြောင့် တော်တော်ဝမ်းသာရပါတယ်။ Myanmar Entrepreneur blog ကလည်းတော်တော်ကောင်းပေမယ့် ဖိုရမ်တစ်ခုအနေရင် ရှိရင်ကောင်းမယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ မှာ အရေးကြီးဆုံးထိပ်စီးတွေထဲမှာပါတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး တွေထဲမှာ အလယ်က ဆွေးနွေးချက်တွေ ပျောက်နေတယ်လို့ ခံစားမိတဲ့အတွက် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
(1) မောင်စူးစမ်းရေးတဲ့ စီးပွားရေးအဘိဓာန် (2005 ဇွန်)
(2) ဆရာကျော်ဝင်းရဲ့ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေး အဘိဓာန် ( 2007 ဒီဇင်ဘာ )
(3) The Penguin ကထုတ်တဲ့ Dictionary of Economics (fifth edition 1992)
(4) မောင်ဘောဂရေးတဲ့ စီးပွားရေးအဘိဓာန် ( 1996 စက်တင်ဘာ )
( စီးပွားရေး အဘိဓာန်ရေးတဲ့ ဆရာများအားလုံးကို အထူးတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ဆရာတို့ မှာ အဘိဓာန်ရေးသည့် ခုနှစ်နှင့် အခါအားလျော်စွာ အခြေအနေများမူတည်ပြီး အကုန်အဓိပ္ပာယ် မပြည့်စုံသေးသည်ကို Blog ကနေ ရေးသားလိုက်ရသည့်အတွက် တမျိုးမထင်စေလိုပါ။ အဆင်ပြေလျှင် လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမယ့် စကားလုံးအသစ်များ ကို တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် update လုပ်ဖို့ လိုအပ်လှပါသည်။ အင်္ဂလိပ် လိုချည်းရေးသားသည့် စာအုပ် ခုနှစ်ကို ကြည့်ရင် သိသာပါသည်။ သို့ အတွက်ကြောင့် (Positive) အပြုသဘော ထင်မြင်ချက်လေးအနေဖြင့် ရေးသားလိုက်ရပါသည်။ )
Posted by : Flying ^A^ Posted @ 2:38 PM